Xisbiga AKP ee dalka Turkiga oo ku guuldareystay aqlabiyaddii Baarlamaanka | SomaliSwiss Wararka Somaliswiss
Home / Home / Xisbiga AKP ee dalka Turkiga oo ku guuldareystay aqlabiyaddii Baarlamaanka
Markii u horeysey muddo 13 sano ah ayaa xisbiga talada dalka Turkiga haya ee AKP waayey aqlabiyad uu keligiis ku soo dhiso Xukuumadda.
Xisbiga dadka Kurdida ee HDP oo markii u horeysey ka qaybqaatey dooashada kadib heshiiskii ay wada galeen Xukumaddii Erdogan ayaa heley codad ka badan 13%, Waxaana ay markii u horeysey Xildhibaano ku yeesheen baarlamaanka Turkiga o ka kooban 550 Xildhibaan.
Kadib markii la tiriyey cidadkii la dhiibtey 99.9% ayaa Xisbiga AKP heley 41% halka ay markii hore ka haysteen in ka badan 49%, waxaana muuqda in humiyeen aqlabiyaddii ay ku hoggaamin jireen dalka Turkiga.
HDP oo taariikh dhigay
Xisbiga CHP ee Republican People’s Party ayaa heley 25% codadkii la dhiibtey halka Xisbiga kale ee dhaq-dhaqaaqa Wadaniyiintu ay heleen 16,5%.
Xisbiga dadka Kurdidu lee yihiin ee HDP ayaa noqdey kan u weyn ee guushu racdey Xisbiyada yaryar markii u horeysey ee ay galaan baarlamaana, waxaana ay ku yimaadeen codad gaaraya 13%. Dadka Kurdida ah ee Turkiga ayaa garaya 18 Milyan oo qof, Waxaana ay mudo dheer u dagaalami jireen in ay ka go’aan dalka Turkiga, ama helaan caddaalad sida in loo oggolaado afkooda ooyo in uu kamid a noqdo kan dalka Tukiga.
Xisbiga Kurdida ee HDP ayaa horey u sheegey in aysan xukuumad wadaag ah la soo dhiseyn Xisbiga Caddaaladda iyo Horumarka ee AKP, waxaana ay ka soo horjeedeen qorshaha Madaxweyne Erdogan doonaayey in Turkiga laga dhigo mid madaxweynuhu leeyahay awoodda halka uu hadda ka yahay mid Baarlamaani ah.
Xukuumad Caynkee ah?
Xisbiga AKP ayaa ah xisbiga ugu weyn ee dalka Turkiga, haddii saddexda Xisbi ee mucaaraka ah isu tagaan waa adagtahay in ay soo dhisaan Xukuumad, maadaama aragtidoodu ay aad u kala fotahay.
Sida ugu macquulsan ayaa ah in Xisbga AKP soo dhiso Xukuumad uu la wadaago mid kamid ah Xisbiyada Mucaaradka ah, ama uu go’aansado in uu dhiso Xukuumad aan aqlabiyad haysan haddii ay wada shaqeyn ka helaan mid kamid ah Xisbiyadda kale in aan xukuumadda la ridin.
Khudbad uu jeediyey Raysalwasaaraha dalka Turkiga Ahmed Davutoglu goor danbe ee habeenimadii Xalay (Axad) ayuu ku muujiyey sida Xisbigiisu u yahay kan guushu raacdey, waxaana u yiri Doorashada waxaa ku guuleystey AKP, isaga ayaana ah Xisbiga u weyn ee daka Turkiga.
Afhayeen u hadey Xisbiga mucaaradka ah ee Republican People’s Party ayaa sheegey in doorashadii barlamaanka laga guuleystey Erdogan, maadaama sharcigii uu doonaayey in uu talada dalka gacantiisa isugu keeno dadku diideen isla markaana uu waayey wax aqlabiyad ah.
Xisbiga dhisaaya xukuumad aqlabiyad ah waa in uu haystaa 276 Xildhibaan iyo ka badan.
Xisbiga AKP ayaa dalka Turkiga ka soo talinaayey tan iyo sanadkii 2002, waxaana dhaqaalaha Turkigu kor u kacay tan iyo markaas 68%.